I-S & P 500 yoVimba
I-S&P 500 iqhubela phambili nokwenza iRealback Pullback ngakwiNqanaba le-4550
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Disemba 1
I-index ye-S & P 500 yehle ngaphantsi kwe-4,600 enye ixesha elide ukusuka kwi-intraday ephezulu ye-4,653 efikelelwe ngosuku. Ngosuku lokuqala lokurhweba lwenyanga, isalathisi sawela kwi-0.32 yeepesenti, ibeka i-S & P 500 kwindlela yokubuyisela ukulungiswa phantsi kwezinga le-4,550. Kufuneka igxininiswe, nangona kunjalo, ukuba abathengisi bahlala belumkile nangona kukho iinkxalabo ezixubeneyo malunga ne-COVID-19 yaseMzantsi Afrika, ebizwa ngokuba Omicron.
Amanqanaba okumelana: 4,800, 4,720, 4,650
Amanqanaba enkxaso: 4,500, 4,400, 4,300
Ngelixa befuna inkxaso, i-S & P 500 yandisa ilahleko yayo kwiseshoni yangaphambili ngaphantsi kwamanqanaba e-4,600. Iibhere ziya kufuneka zijongane nenqanaba elikhulu lenkxaso ye-4551 kwi-downside. Ngaphambi kokuba ukuwa kudlulele kumanqanaba e-4,272 ngo-Oktobha, i-bounce yokulungisa ephakathi ukusuka kumanqanaba e-4,550 ayikwazi ukukhutshwa.
Ukwaphulwa okungaphezulu kwamanqanaba angama-4,650 kunokuqala kwaye kukhawulezise ukubuyiswa. Ukuba iguqulwe, inqanaba le-4,720 liya kuba yinkxaso efanelekileyo yokumelana nenkxaso enokunciphisa ukuhla. Ngexesha elide ukuya kwixesha eliphakathi, ikhefu elilandelayo elingaphantsi kwamanqanaba e-4,550 liya kubangela ukuwa okunzulu kakhulu ngaphantsi kwe-4,400 kunye namanqanaba angama-4,300.
Ngexesha elifutshane, isalathisi sihlala siphantsi koxinzelelo ukusuka kwiiyure ze-4 ezihamba nge-avareji ye-5, kunye namanqanaba e-4,500 engqondweni. Abarhwebi abanomdla kwi-S & P 500 kufuneka bathenge nayiphi na i-pullbacks yobugcisa ukuya kwinqanaba le-4,500.
Ukuqala kwendlela entsha ye-bearish yexesha elifutshane kuya kuqinisekiswa ukuba amaxabiso amaninzi avale ngaphantsi kwamanqanaba abalulekileyo e-4,551. Amanqanaba e-4,650 kunye ne-4,720 athathwa njengokuchasana kwexesha elisondeleyo. Ukuseka kwakhona ithoni echanekileyo, ixabiso kufuneka liphakame ngaphezu kwe-4,650, kunye nokuchasana malunga ne-4,720.
I-S&P 500 iwela ngaphantsi kwe-4,700 ilandela ukunyuka kwezivuno zikaNondyebo wase-US
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Novemba 24
I-S & P 500 igcina ulungiso olubi ukusuka nje neentloni ze-4750 uphawu olufikelelwe ngoMvulo. Isalathiso siya kuvala kwinqanaba elilandelayo lengxabano ephantsi kufutshane ne-4,650, oko kuthetha ukuvala okungalunganga ngaphambi kwempelaveki ende. Phezulu Unondyebo wase-US uvelisa zinefuthe elibi kwimivuzo enzima yetekhnoloji, ebangela ukuthengiswa kwe-tech equities.
Amanqanaba okumelana: 4,800, 4744, 4720
Amanqanaba enkxaso: 4650, 4600, 4551
I-S&P 500 ilwela ukugcina umkhondo wayo ngaphezulu kwendawo yenkxaso ye-4650 njengoko abathengisi ekugqibeleni bejonge ukuthatha ithuba lokuhla kwexesha eliphakathi. Okwangoku, njengoko imarike ithengisa ngaphezu kwendawo yenkxaso ye-4650, uxinzelelo olubi luqikelelwa ukuba luyancipha kwaye luhlale lujikeleze amanqanaba e-4700, ludibanisa ngakumbi kwiseshoni elandelayo.
I-RSI okwangoku ingaphantsi kwamanqaku ayo athengiswayo, kwaye ixabiso liye lajika liphantsi emva kokubuyisela kwi-4,744 yeveki ephakamileyo kwinqanaba leeseshoni zangaphambili, eqinisekisa ukujonga uluhlu. Ngexesha eliphakathi, umyinge ohambahambayo we-13 uya kuhlala uhleli kwaye uya kufuduka ngokuthe tye ukuze asebenze njengomqobo wokubuyisela ixabiso.
Ukususela ekuphuhliseni ummandla wokudibanisa malunga namanqanaba e-4720 ekuqaleni kwale veki, i-index ye-S & P 500 iye yawela kwixesha elifutshane. Ngenxa yokuba ixabiso liwele ngaphantsi kwe-4 iyure ye-MA 5 kunye ne-13, ikhefu lenkxaso esondeleyo kumanqanaba e-4650 kunokwenzeka ngaphambi kokuba ixabiso libuyele phambili.
Indawo yenkxaso ye-S & P 500 kwi-4650 kufuneka ibambe ukugcina ingozi ephantsi ngokukhawuleza ibuyele kwi-4600, ngasentla apho sifumana ukuchasana phezulu kwimiyinge ehambayo kumanqanaba e-4720, okufuneka kunciphise ukuqhubela phambili kwi-rebounds elandelelanayo ekuqaleni.
I-S&P 500 ixhasa i-4,650/4,720, iyachasa ukuhla kwidatha eyomeleleyo yase-US
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Novemba 17
I-S&P 500 inesiqalo esinesiphithiphithi kwiveki, iguquguquka phakathi koluhlu lwe-4,650/4,720 yommandla phakathi kweemvakalelo zentengiso. Isalathisi ngoku sithengisa tyaba ngemini, malunga nendawo ephakathi kolu luhlu, ngaphantsi kwe-4,700 kancinane. Idatha ye-US ye-macroeconomic encomekayo iqhube i-stock market boom, njengoko Sales lwezezimali linyuke laya kutsho kwiinyanga ezisixhenxe ukuphakama, ngaphezulu kokuphinda kathathu inani likaSeptemba.
Amanqanaba okumelana: 4800, 4750, 4720
NgoLwesibini, i-S & P 500 yavuka kakhulu njengoko imarike igcina ukuchasana kwexabiso layo eliphambili le-4720, kunye nokunyuka kwe-avareji ehambayo ye-13, okwangoku kwi-4670. iseshoni yangoku.
Ngaphandle kwenqanaba lamva nje, lixesha lokubiza isenzo esilumkileyo kwesi nqanaba eliphezulu lokuzinzisa, kunye nokuchasana okulandelayo kuboniswe kumanqanaba angama-4800 kwaye, okubaluleke kakhulu, kuluhlu lwamaxabiso aphezulu kumanqanaba angama-4720 ngoNovemba, ekulindeleke ukuba hlala ungumqobo omkhulu wendlela.
Kwixesha leeyure ze-4, umxholo wohlalutyo lobugcisa we-S&P 500 index okwangoku ukwindawo enomdla kakhulu. Ikhefu ngaphezu kwamanqanaba e-4720 iya kuba yi-bullish, kodwa ikhefu elingaphantsi kwamanqanaba e-4650 kumgca wokuxhasa othe tye kuya kugcina i-uptrend ingazinzile.
Ukuphonononga iimpawu zeseshoni yangaphambili, babonise ukutyhala phambili. Nangona ukuhla, amandla ahambelanayo ahlala edlulileyo kwi-50. Zombini i-5 kunye ne-13 i-avareji ehambayo iguquke ingathathi hlangothi kwaye inokusondela kwi-crossover phantsi kwamanqanaba e-4680.
I-S&P 500 Ifikelela kwiNgcaciso ye-FOMC eNtsha yexesha lonke edlulileyo 4,650
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Novemba 3
I-S & P 500 iyaqhubeka nokunyuka kwayo kwiveki entsha, ikhuphuka i-0.20 ipesenti edlulileyo kwi-4,650 ngexesha lokubhala. Ukuzithemba kwimarike kuyaqhubeka ukomeleza kulo lonke usuku lwaseMntla Melika, njengoko kungqinwa kukunyuka kwe-stock index yase-US Isiteyitimenti seFOMC njengoko izinga lomgaqo-nkqubo lihleli lingatshintshwa.
Amanqanaba okumelana: 4750, 4700, 4650
Amanqanaba enkxaso: 4600, 4551, 4500
Kwiitshathi zemihla ngemihla, iinkunzi zeenkomo zenze intshukumo enhle ukusuka kwi-pullback yazo yangaphambili, kwaye isalathisi sinokuzama ukuphula inqanaba lokumelana ne-4650. Okwangoku, ukuba iinkunzi zeenkomo azikwazi ukubuyisela ulawulo ngeli nqanaba, ukubuyisela ukubuyisela kwinkxaso elandelayo malunga namanqanaba e-4,600 kunokwenzeka.
I-bias yexesha elide ihlala iphezulu ngokuqaphela, kunye nokuchasana okuphambili kokuqala kwi-4,700, ekufuneka yoyiswe ukususa indlela yokufudukela kwimimandla ye-4800. Nangona kunjalo, sinokubona uvavanyo olungqongqo ngakumbi lweqela lamanqanaba oqikelelo kwindawo ye-4650/4700 kwixesha elizayo.
Kwitshathi yeeyure ezine, i-S & P 500 iphule umgca we-4600 wokuchasana-ujika-ukuxhasa. Ikhefu elingaphantsi kwale nkxaso liya kwenza ukuba i-bullish bounce ingasebenzi, ngelixa ikhefu elingaphezulu phezulu liqinisekisa ukunyuka. Kwi-upside, ukuba i-S & P 500 ihluleka ukuphula kwinqanaba le-4650, inokubuyela kwinqanaba le-4600.
Isalathiso silungile kuphela xa uthengisa ngaphezulu kwe-4600; inkxaso ebalulekileyo inokufumaneka kwi-4551 kunye ne-4500. Isalathiso sibi kuphela xa kuthengiswa ngaphantsi kwamanqanaba e-4500, kunye nokuchasana okubalulekileyo phakathi kwe-4650 kunye ne-4700. Ingaqhubeka iqhubela phambili kwiseshoni elandelayo.